१ दिनको लागि मुख्यमन्त्री बनेकी १९ वर्षकी छात्राले आफ्नो कार्यकालमा के–के काम गरिन् ? (हेर्नुहोस् भिडियो) – Dainiki Online
28/01/2021 28/01/2021 admin1 Comment on १ दिनको लागि मुख्यमन्त्री बनेकी १९ वर्षकी छात्राले आफ्नो कार्यकालमा के–के काम गरिन् ? (हेर्नुहोस् भिडियो)
काठमाडौं। भारतको उत्तराखण्ड राज्यले हिजो एक दिनको लागि १९ वर्षकी छात्रालाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा पायो । हरिद्वारकी सृष्टि गोस्वामी हिजो १ दिनको लागि उत्तराखण्डकी मुख्यमन्त्री बनिन् । मुख्यमन्त्री सृष्टिलाई विधानसभा भवनमा उच्च शिक्षा मन्त्री धनसिंह रावतले स्वागत गरे । मुख्यमन्त्रीको रुपमा सृष्टिले करिब १ दर्जन विभागका अधिकारीहरुसँग बैठक गरिन् र कैयौं निर्देशनहरु दिइन् ।
३ बजे उनले बालिका निकेतनको निरीक्षण गरिन् र यहीँ बालिकाहरुसँग दिउँसोको खाना खाइन् । बेलुकी साढे ४ बजे उनी हरिद्वारको लागि प्रस्थान गरिन् । मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतले प्रदेशका बालिकाहरुलाई सशक्त बनाउनको लागि यो प्रयास गरिएको बताए । प्रदेशका बालिकाहरुमा प्रतिभाको कमी छैन र उनीहरु जस्तोसुकै जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिन यस्तो गरिएको रावतले बताए । सृष्टिले आफ्नो कार्यकालमा केही महत्वपूर्ण निर्देशन दिएको बताउँदै बालिकाको शिक्षा, सुरक्षा र प्रदेशबाट मानिसहरु पलायन हुनु प्रदेशको मुख्य समस्या भएको बताइन् ।
1 thought on “१ दिनको लागि मुख्यमन्त्री बनेकी १९ वर्षकी छात्राले आफ्नो कार्यकालमा के–के काम गरिन् ? (हेर्नुहोस् भिडियो)”
Sujan gaire says:
Tik tok bandaa garnu ramro ho ma ni samarthak xu